आफू नि बचौं अरुलाई पनि बचाऔं – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०७८, सोमबार ०६:५९
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दिनानुदिन दिन दुई गुणा रात चार गुणा झैं बढ्दै छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि उत्तिकै मात्रामा बढिरहेको छ ।
कोरोना महामारीको विश्वकै उच्च जोखिमको रुपमा नेपाल गणना भैरहेको छ। यति हुँदा पनि हामी आम नेपाली र यहाँको सरकार अलिकति पनि सचेत भएको देखिदैन। देशमा हस्पिटल नपाएर मरेका लास बोक्नलाई साधन छैन तर नेताहरू आफ्नो पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न हेलिकोप्टरको सुबिधा उपभोग गरिरहेका छन् ।अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर बिरामी तड्पी तड्पी अस्पतालको चिसो छिडिमा ज्यान गुमाउनु परेको छ |
अक्सिजनको कुरा त एउटा भयो, यहाँ त अस्पतालको भुईंमा उपचार गर्छुभन्दा पनि पाउने अवस्था छैन । यस्तै दर्दनाक दृश्य दैनिक जसो ७ – ८ हजारभन्दा बढी आउन थालेका छन्। यसरी दैनिक यस्ता डर लाग्दा केस आउँदा उत्पन्न हुने समस्या आज त थेग्न सकिएको छैन भने भोलि यि केसहरु बढ्दै जाँदा अवस्था कस्तो होला ? तर सरकारलाई जनताको यो दुर्दसासंग कुनै सरोकार छैन । बरु उल्टो जताततै समाचारमा कमिसनका कुराहरु आइरहेका छन् ।
विश्वभरका देशहरु कोरोना महामारीसंग लड्न लागिपरेका छन् तर विडम्बना हाम्रो देशमा भने राजनितिक लडाई चलिरहेको छ । आफ्नो देशको यस्तो अवस्था देख्दा आफू नै लागि परि भोट दिएका नेतालाई आम जनताले धिक्कार्नु बायक के नै छ र ? यो अवस्था देख्दा साँचै दुःख लागेर आउँछ तर हामी जनता पनि कहाँ कम छौं र ? अहिले यस्तो दु:ख पाउँदा पनि केही समय पछि बिर्सेर फेरि तिनै नेताको पछि लागि फेरि जिताउन लाग्छौं । यस्तो अवस्था पनि हामी निहित स्वार्थ बोकेर सरकारले गरेका गल्तीलाई ढाकछोप गरि उल्टो तारिफ गरेर बस्छौं । याद गरौं एक दिन यी सबै कुराको हिसाब किताब पक्कै हुने नै छ ।तर त्यतिबेला धेरै ढिला भैसकेको हुने छ ।
अब कोहि कसैको आश नगरी आफैं सचेत हुनुको विकल्प हामी नेपालीसँग छैन । यहाँ जसलाई पर्यो उसैलाई थाहा हुन्छ त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा । अब हामी आफैं सचेत भैई अनावश्यक घर बाहिर ननिस्की बस्नुको विकल्प छैन । जो हामी अनावश्यक बाहिर हिडिरहेका छौं के कामले हिड्दै छौं ? अब आपतकालीन अवस्था र अस्पताल जाने काम बाहेक अन्य कामको लागि बाहिर जानु पर्ने कुनै कारण नै छैन। अब कहिँ कतै काम छ भने पनि त्यसको महत्व हेरेर प्राथमिकताको आधारमा मात्र जानु पर्ने हुन्छ। अब सबै संघ संस्था, सरकारी कार्यलय, पसल बन्द नै छन् । सबै बन्द छ तर बाटोमा भने ट्राफिक जाम भइरहेको देखिन्छ । पुलिसले हात जोडेर घरमै बस्नुस् न भन्न परेको छ । यो कस्तो चेतना हो हाम्रो ? अनि हामी कति शिक्षित हौं ? आफ्ना लागि भनेको कुरा हो भनेर पनि नबुझ्ने हो भने एकदिन यसको ठूलै क्षति भोग्नु पर्ने हुन्छ । कृपया केही समयको लागि आफू पनि सुरक्षित रहि अरुलाई पनि सुरक्षित राख्नतिर अग्रसर गराऔं। यो कोरोना भाइरस केहि समयको लागि खतरनाक नै हुनेछ र बिस्तारै यो पनि कमजोर हुँदै जान्छ र केही समयमा यो पक्कै पनि नियन्त्रणमा आउँछ । त्यसको लागि हामी केहि दिनको लागि जहाँ छौं त्येही बसौं । बिस्तारै पछि सामान्य हुँदै जानेछ अनि त्यसपछि जता गए पनि जे गरे पनि सहज हुनेछ। एक जनाको लापरबाहीले आफ्नो घर , समाज, टोल अनि राष्ट्र नै ठूलो जोखिममा हुनेछ । परेकोलाई मात्र थाहा हुन्छ यसको वास्तविक पिडा कस्तो हुन्छ भनेर । तर त्यो अवस्था आउन नदिनलाई तपाई हामीले अलि सहज भैई सोचेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । यी आम समस्या बुझ्दा बुझ्दै तपाईं हामी जथाभावी बाहिर निस्केर यो महामारी आफ्नो घरमा ल्याउनतिर नलाऔं। यो यसै गरौं भन्ने बेला नभएकोले खास समय र अवस्था हेरि कुनै पनि कुराको निर्णय लिने गरौं ।
अब के गर्ने त भन्ने विषयमा सरकारले आम जनता, सबै दल, वैज्ञानिक,डाक्टर,देशका बुद्धिजीवी,ब्यापारी सबैलाई एक ठाउँमा राखि बैठक बसि राष्ट्रिय महामारी नियन्त्रण टोलि निर्माण गरि अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकार आफ्नै आयु बढाउने सुरमा हुनु हामी आम नेपालीको लागि असाध्यै दुर्भाग्य हो ।
कोहि कसैलाई पनि आम जनता औषधि नपाएर मरेको, लास पोल्न ठाउँ नभएको, अक्सिजन नपाएर छ्ट्पटाएको कुरामा एक रति पनि चिन्ता छैन । यी जो जो नेता बनेका छन् यी अन्तै संसारबाट आएका हुन कि के हो? यिनका मनमा अलिकति पनि दया, माया,ममता हुँदैन कि क्या हो? होइन भने अहिले कोहि कसैले पनि यो अनावश्यक राजनीतिक कुरामा नलागेर यो महामारीसँग लड्न लाग्नु पर्ने होइन भन्या ? अब पनि पहिलाको जस्तो जनताले फेरि भोट हालिहाल्छन अनि फेरि नेता बनौंला भन्ठानेको होला अब चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुँदैन । अब जनताले चेतीसके। अब पनि हामी नचेत्ने हो भने नेताभन्दा हामी अझ बढी खराब हुने छौं र कोहि नेतालाई गाली गर्ने अधिकार पनि हामीलाई हुने छैन । यो महामारीको बेला हामी सबै मिलि सबै ठाउँबाट आफूले सकेको सहयोग गरौं आफू नि बचौं अरुलाई पनि बचाऔं ।